मुख्यमन्त्री कप भलिबलको फ़ाईनल:तनहुँले जि’त्यो खेल(हेर्नुहोस भिडियोमा) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. मुख्यमन्त्री कप भलिबलको फ़ाईनल:तनहुँले जि’त्यो खेल(हेर्नुहोस भिडियोमा) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
मुख्यमन्त्री कप भलिबलको फ़ाईनल:तनहुँले जि’त्यो खेल(हेर्नुहोस भिडियोमा)
मुख्यमन्त्री कप भलिबलको उपाधि पुरुष तर्फ तनहुँ जिल्लाले उ’चालेको छ ।
कास्की जिल्ला भलिबल संघको आयोजनामा सञ्चालित प्रतियोगिताको पुरुष तर्फका उपाधि तनहुँले उचाल्यो । एक सेटले पछि परेको अवस्थालाई उ’ल्ट्याउँदै तनहँुले स्याङजामाथि ३–२ सेटले प’राजित गर्दै उपाधि जि’त्न सफल भएको हो । पहिलो सेट स्याङजालाई २५–२३ तनहुँले गु’माउन पुग्यो । दोस्रो र तेस्रो सेट भने तनहुँले आफनो पक्षमा पार्यो ।
२५–१७ र २५–२० मा लगातार दुई सेट लिएको तनहुँले चौथो सेट भने स्याङलाई सु’म्पिदैं खेल नाटकीय रुपमा पाँचौ सेटमा पुग्यो । चौथो सेट तनहँुले स्याङजालाई १३–२५ मा सु’म्पिएपछि खेल निकै प्रतिस्प’र्धात्मक मो’डमा पुग्यो ।
अ’न्तिम तथा निर्णायक सेटमा भने तनहुँले स्याङजालाई १५–१० को सेटले पन्छा’उँदै पहिलो मुख्यमन्त्री कप भलिबलको उपाधि आफनो नाममा लेखायो । नगद २ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दा स्याङजा भने उपविजेता बन्दै नगद १ लाखमा चि’त्त बु’झाउन बा’ध्य भयो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको February 21, 2021 February 21, 2021 109 Viewed